Gburugburu Ihe Omume Kacha Mma maka WordPress | Martech Zone
Anyị na-akwadebe maka nchịkọta ego anyị nke abụọ maka Leukemia & Lymphoma Society na a Egwú egwu & Teknụzụ ebe a na Indianapolis na Eprel 26th. N'afọ gara aga, anyị welitere ihe karịrị $ 30,000 ma anyị na-atụ anya iti nke afọ a.
N'afọ a, anyị kpebiri ịmegharị ihe omume ahụ iji mee ka ọ dị mfe icheta, na ịmepụta saịtị nke gosipụtara nke ọma ihe ụtọ dị egwu anyị nwere n'afọ gara aga. Ọ Ourụ anyị na-enugharị n'oge na-adịghị anya bịara kwụsị, ọ bụ ezie na anyị nwalere isiokwu WordPress mgbe WordPress isiokwu nke mepụtara maka ihe omume. Iji kwuo ya n'ezoghị ọnụ, ha dị ara.
N'ezie, nke kacha mma e gosiri isiokwu omume na ọkacha mmasị anyị WordPress isiokwu saịtị mere ka anyị laghachi izu ka anyị na-enweghị ike ịchọpụta otu esi edozi ya. Enweghị ihe atụ data, akwụkwọ jọgburu onwe ya, na nkwado efu na-akpali anyị ịda mbà.
Anyị enweela ọmarịcha ihu ọma nke na enweghị m obi eziokwu mgbe m zụtara isiokwu ọzọ… mana m rutere na Showthemes ma onyinye ha, yana elekwasị anya ha, na isiokwu mmemme.
N'ime awa ole na ole m nwere saịtị ahụ n'ụzọ zuru ezu e mere na ha Isiokwu Fudge bi na enweghị nsogbu ọ bụla ma ọlị! Ọbụna ọ nabatara wijetị tiketi ị ga-eme Eventbrite nke ọma!
Ihe omume na ogbako ogbako na-anabatakwa, na-eme ka ihe omume gị na saịtị ma ọ bụ microsite mara mma ịchọgharị - ọbụlagodi obere ntaneti. Anyị hụrụ isiokwu ndị ahụ n'anya nke ukwuu nke na anyị debara aha dị ka njikọta ma nwee njikọ ndị ahụ na post a. Nwere olileanya na ị masịrị ha dịka anyị na-eme - ma hụ gị n'April 26th na mmemme anyị!
Akụkụ nke afọ: N'afọ na-abịa, ejiri m n'aka na anyị ga-ahazi isiokwu ụmụaka nke na-enye akara ngosi dị egwu ighter mana isiokwu ahụ masịrị anyị nke ọma, dịkwa!
Tags: isiokwu ogbakoogbako gburugburuisiokwu omumeihe ngosiisiokwu vertoh
Mee 10, 2015 na 6: 56 AM
Odikwa nma! M na-a swearụ iyi site GeneratePress. Emeghị ya ka ọ bụrụ ihe omume kama ọ bụ akwaaji mara mma nke na-enweghị ụdị ụdị ụdị ị na-esote.